Maxamed Dheere oo siyaasadiisu ay ku cuslaatay siyaasiyiinta Bari ee taageersan Col. C/llahi Yusuf
Col. C/llahi Yusuf ayaa qorshaha uu xaruunta uga dhigtay Jowhar waxey ahayd inuu adeegsado xooga ciidan ee uu leeyahay gudoomiye Maxamed Dheere si uu dagaal ugu qaado beelaha degan koofurta Muqdisho, kuwaas oo aan aqoonsaneyn madaxtinimada C/llahi Yusuf.
Marar badan ayaa la qorsheeyey dulaan iyo abaabul dagaal haddana ma dhicin. Maxamed Dheere ayaa gulfka laga filayey bedelkiisa wuxuu bilaabay siyaasad dib u heshiisiineed iyo nabadeyn, taasna waxey keentay ismaandhaaf dhexmaray isaga iyo ujeedada C/llahi Yusuf.
Maxamed Dheere oo daacadnimo wax badan kula shaqeeyey taageerayaasha C/llahi Yusuf ayaa wax badan ka ogaadey siyaasadaha hoose oo ay beel ahaan ku dhaqmayaan. Waxaa Maxamed Dheere u cadaatay waxyaabaha C/llahi uu ku diidan yahay Muqdisho, kuna baadi goobayo Kismaayo, Baydhabo iyo Bossaso.
Garashada Maxamed Dheere ayaa salka ku heysa in C/llahi uu ka shaqeeyey wax kasta oo iska horkeeni kara beelaha wada degen Muqdisho iyo inaan xoolo dowladeed aan la dhexgeyn dadka reer Muqdisho si dhaqaalahaas intiisa badan aysan uga nafcin.
Maxamed Dheere iyo dadka degan Jowhar ayaa malaayiin doolar waxey qaan ahaan uga baxday qarashyada faraha badan oo ay ku dowladeynayeen siyaasiyiinta taageersan Col. C/llahi. Dadka rayidka ah oo aan weli helin qaantii ay ku sheeganayeen kooxda taageersan C/llahi Yusuf ayaa waxaa bilowday in siyaasiyiintaas ay u guurayaan xaruunta cusub oo ah magaalada Baydhabo.
Dowlada Itoobiya oo soo jeedisey in C/llahi uu isaga guuro Jowhar ayaa marar badan madax salaax iyo hubsiin ku heysey Maxamed Dheere. Sidoo kale waxaa Magaalada Jowhar lagu reebay siyaasiyeen ka soo jeeda Bari oo loogu tala galay iney hoos u dhigaan heerka dareenka kacsan ee madaxda iyo dadka Jowhar, kuwaas oo mararka qaar muujinaya ineysan raacsaneyn C/llahi inkasta oo ay iska cadahay iney hoos kawada socdaan oo dhegahoodu isku xiran yihiin.
Dowlada Itoobiya ayaa aaminsan in haddii dowladu degto magaalada Muqdisho ama Shabeelooyinka aysan u soortogeleyn iney ciidamo halkaas geyso, maxaayeelay dadka ka soo jeeda degaankaas oo u heysta Itoobiya iney tahay cadowga Soomaalida, sidaasna aysan uga heleyn taageero, lagana yaabo iney kala horyimaadaan dagaalo. waxeyna qabtaa Itoobiya inay ciidamadoodu ay gacanta ku hayaan dowladda C/llahi Yusuf inta ay ka xoogeysaneyso, waxeyna kula taliyeen in magaalooyinka u dhow xuduuda uu ka dhigto xaruun ku meel gaara.
Maxamed Dheere ayaa dadaalada taagerayaasha C/llahi aan u hayn wax niyada, tilaabana doonaya inuu ka qaado hantida ka maqan dadka uu gudoomiyaha u yahay, waxaana suurtogal ah inuu ka codsado Beesha Caalamka ineysan bixin wax lacaga oo la siinayo xubnaha baarlamaanka iyo kuwa dowlada inta laga bixinayo qaanta lagu leeyahay dowlada C/llahi. Waxaa sidoo kale suurtogal ah inuu ku soo biro hogaamiyeyaasha Muqdisho oo uu si dhaso leh u abuuro isbaheysi hubeysan oo ka soo horjeeda isbaheysiga cusub ee Baydhabo.